Anaran'ny vokatra: fitafiana ratra amin'ny rano
Famaritana vokatra: 28ML
Sehatra fampiharana: Mamorona sosona miaro amin'ny tampon'ny ratra ka mahatonga ny sakana ara-batana. Nampiasaina ho an'ny ratra kely, fanalan-jaza, fahatapahana ary ratra ambonimbony hafa sy fikolokoloana ny hoditra manodidina (toy ny fikolokoloana ny hoditra stoma)
Fanoritsoritana ny vokatra: Vahaolana mazàna io, ary ny vokatr'ireo dia tsy misy vokany amin'ny fanafody. Ireo zavatra ao anatiny dia tsy hoentin'ny vatana. Nanome tsy misy steril.
Vokatra namboarina ho an'ny mpanjifa Guangzhou Structure: lamba tsy tenona, hydrogel, film perla Function: rano fenoina sy compresse mangatsiaka Raha ampitahaina amin'ny vokatra mitovy aminy eny an-tsena, ity vokatra an'ny orinasa ity dia mampiasa akora japoney + teknolojia matotra ary ambany ny tahan'ny allergy. Izy io dia afaka manampy akora ilaina amin'ny famoahana miadana. Famaritana momba ny vokatra ● FITSANGANANA MAHASOA FITSIPIKA- Rehefa mandeha ny fotoana dia very endrika sy famaritana ny endritsika tarehy. Ny lambam-pandriana avo lenta dia manana fiakarana matanjaka ...
Vokatra namboarina ho an'ny mpanjifa Guangzhou Structure: lamba tsy tenona, hydrogel, film perla Function: rano fenoina sy compresse mangatsiaka Raha ampitahaina amin'ny vokatra mitovy aminy eny an-tsena, ity vokatra an'ny orinasa ity dia mampiasa akora japoney + teknolojia matotra ary ambany ny tahan'ny allergy. Izy io dia afaka manampy akora ilaina amin'ny famoahana miadana. Famaritana ny vokatra Saron-tava anti-ketrona eo alohan'izay mampihena ny ketrona eo amin'ny handrina ary manalefaka ny hoditra, afaka mampiasa azy mandritra ny 6-8 ora ianao ary esorina rehefa ...
Vokatra namboarina ho an'ny mpanjifa Guangzhou Structure: lamba tsy tenona, hydrogel, film perla Function: rano fenoina sy compresse mangatsiaka Raha ampitahaina amin'ny vokatra mitovy aminy eny an-tsena, ity vokatra an'ny orinasa ity dia mampiasa akora japoney + teknolojia matotra ary ambany ny tahan'ny allergy. Izy io dia afaka manampy akora ilaina amin'ny famoahana miadana. Famaritana ny vokatra Ahenao ny fihenan'ity fitsaboana mahery vaika ity izay miasa amin'ny fahitana azy tsara sy manadio ny hoditra eo amin'ny hatoka Safidy voajanahary amin'ny lipofilling, manana ...
Vokatra namboarina ho an'ny mpanjifa any ivelany (nalefa tamin'ny orinasam-barotra avy any ivelany) Hira firafitra: lamba tsy tenona, hydrogel, sarimihetsika perla. Mampihena ny edema ôtra (azo ampiharina amin'ny areti-maso amin'ny fanafody fanatoranana amin'ny fandidiana), izy io dia ampiasaina hifikitra eo ivelan'ny mason'ny marary mihinana fanatoranana ankapobeny na marary tsy mahatsiaro tena mba hanomezana marary amin'ny faritra somary nakatona sy mando hisorohana ny fihenan'ny keratitis. na manala reraka ny maso. Raha ampitahaina amin'ny vokatra mitovy amin'ny ...
Vokatra namboarina ho an'ny mpanjifa Guangzhou Structure: lamba tsy tenona, hydrogel, film perla Function: rano fenoina sy compresse mangatsiaka Raha ampitahaina amin'ny vokatra mitovy aminy eny an-tsena, ity vokatra an'ny orinasa ity dia mampiasa akora japoney + teknolojia matotra ary ambany ny tahan'ny allergy. Izy io dia afaka manampy akora ilaina amin'ny famoahana miadana. Famaritana momba ny vokatra Tsy maintsy ilaina amin'ny kitapo kosmetika rehetra ny vehivavy raha toa ka nisy vokany ratsy teo amin'ny masonao ny fihenjanana isan'andro sy ny fanahiana dia aza manahy. Misaotra an'i o ...
Raha toa ka tsy misy singa mavitrika ampidirina ny valan-tratra hydrogel, dia azo ampiasaina ho patch mamirifiry mangatsiaka izy io noho ny hetsiky ny hydrogel mangatsiaka. Manampy ny vehivavy mampinono miaraka amina nipples mivonto.
Rehefa ampidirina ao amin'ny valan-tratra hydrogel ny akora mavitrika, ny hydrogel dia azo ampiasaina ho mpitatitra fanafahana miadana ho an'ny zava-mahadomelina na akora mavitrika hamoaka tsimoramora ireo fanafody na akora mavitrika.
Vokatra namboarina ho an'ny mpanjifa Koreana firafitry ny firafitra: lamba tsy tenona, hydrogel, sarimihetsika mangarahara. Endri-pamokarana: ny loko, ny fofona ary ny mpangatsiaka dia azo ampiana, izay azo namboarina mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa. Raha ampitahaina amin'ny vokatra mitovy amin'izany eny an-tsena, ity vokatra entin'ny orinasa ity dia mampiasa fitaovana japoney + teknolojia matotra ary ambany ny tahan'ny allergy. Ankoatr'izay, tsy mora ny milatsaka ity vokatra ity raha oharina amin'ny vokatra an-trano hafa. Nentina ny vokatra ...
Firafitry ny firafitra: lamba tsy tenona, hydrogel, sarimihetsika biby.
Fitaovana ara-drafitra: Izy io dia mandray endrika antsasa-manapaka kapila kely, izay tsara tarehy.
Ny akora ilaina dia ampidirina ao amin'ny hydrogel ary avoaka miadana, izay afaka manala fanaintainana lava.
Vokatra namboarina ho an'ny mpanjifa Guizhou firafitry ny firafitra: lamba tsy tenona, hydrogel feno zava-mahadomelina, membrane mangarahara. Endri-pamokarana: Ity vokatra ity dia miorina amin'ny patch compresses mahazatra, manampy fanafody fanafody sinoa. Manana ny vokatry ny fanalefahana ny fanaintainana avy hatrany aorian'ny fametahana azy. Mazava ny vokatr'ity vokatra ity, ary ny fanafody nentim-paharazana sinoa dia angonina avy any anaty ala lalina. Famaritana momba ny vokatra ● TSY MAINTSY MORA MAMPIASA NY ACHES AND PAINS: Miasa, milalao ary ...
Ny mpanjifa Japoney sy ny mpanjifa ao an-trano dia manafatra ny vokatra Structure: lamba tsy misy tenona, hydrogel, film mangarahara Ny vokatra dia mampiasa akora manta Japoney sy ny teknolojia famolavolana matotra Miorina tsara ny kalitaon'ny vokatra ary ambany dia ambany ny tahan'ny allergy. Ny vokatra dia mifikitra mafy ary tsy mora milatsaka. Ny vokatra matotra sy azo itokisana, azo hamokarana betsaka, ary natondrana tany Japon, Korea Atsimo ary firenena maro hafa. Famaritana ny vokatra Ge ...
Vokatra namboarina ho an'ny mpanjifa Guangzhou firafitry ny firafitra: sarimihetsika biby mangarahara, hydrogel, harato elastika, sarimihetsika perla. Endri-javatra vokatra: Miaraka amin'ny fotony, dia afaka mahatratra ny vokatry ny anti-ketrona sy ny moisturizing. Vokatra famaritana tsena: vokatra fianakavian'i MAGIC STRIPS. Raha ampitahaina amin'ny vokatra MAGIC STRIPS Family, ity vokatra ity dia tsara kokoa noho ny vokariny raha ampiasaina miaraka amin'ny hydrogel sy moisturizer. Famaritana ny vokatra Saron-tava anti-ketrona mialoha: mampihena ny handrina ...